Atụmatụ kachasị na-eto eto daikon, na-akụ mkpụrụ na nlekọta ụlọ - Daikon - 2019
N'isiokwu a, anyị chọrọ ịgwa gị banyere daikon - ihe ọkụkụ na-akpata, bụ nke a na-ewu ewu n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ ma jiri nwayọọ nwayọọ na-adọta mmasị ndị ọrụ ugbo ụlọ. Kedu ihe bụ daikon, kedu ihe nuances nke ịkụ na ịlekọta osisi a, na ihe a ga-ekwu maka oge nhazi na nchịkọta, ị ga-ama n'ime nkeji ole na ole.
Ị ma? Daikon nwere ihe na-agwọ ọrịa, bụ nke ọdịnaya nke phytoncides na protein ndị na-eme ka ọ ghara imebi nje bacteria.
Atụmatụ ọdịda daikon
Mgbe ị ga-akụ daikon
Nkwadebe ala maka akuku
Otu esi elekọta daikon
Nkọwa nke Daikon, ihe kacha mma maka akuku
Tupu ị na-akụ daikon, ọ bara uru ịchọpụta ihe osisi a bụ na otu esi eji ya. Ya mere Daikon - mgbọrọgwụ ihe oriri, nke bụ subspecies nke radish. Osisi a kacha ewu ewu n'etiti ndị Japan. Na ala nke ọwụwa anyanwụ, daikon na-ere kwa ụbọchị, na mkpokọta ihe ọkụkụ nke osisi ahụ dị ka nke ọka ndị dị na Europe. "Radish ndị Japan" nwere ọdịiche dị iche iche dị ụtọ site na radishes na radishes anyị maara (ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na enweghị nkọcha). A na-eji mgbọrọgwụ mee ihe ma ọ bụ mgbe a gwọchara ya.
Ọ dị mkpa! A na-eri obere akwụkwọ nke daikonnakwadị ka mgbọrọgwụ ihe oriri.
Tụlee ihe bara ezigbo uru nke osisi a. Daikon nwere mmasị maka ihe ndị dị na ya: potassium, calcium, eriri, vitamin C na ọtụtụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye na uru nke ndụ, radish ndị Japanese nwekwara mkpụrụ ọma (ihe dị ka narị asatọ na hectare) na ndụ ndụ (ọnwa 2-3). Ya mere, anyị nwere ngwaahịa bara ọgaranya na vitamin na mkpụrụ osisi, ndị mkpụrụ ya dị elu karịa nke beets, na ọnụ ahịa "ahịa" dị okpukpu iri.
Otú ọ dị, a ghaghị ịghọta na ihu igwe nke Japan dị nnọọ iche na nke anyị, ya mere ọ dị mkpa ịhọrọ ụdị dị iche iche nke daikon, nke ga-agbanye mgbọrọgwụ ma nye ihe ubi a na-anakwere.
Daikon nwere ọtụtụ ụdị. Anyị ga-agwa gị banyere ihe kachasị "agba ọsọ."
Dragọn ahụ. Ụdị oge dị iche iche, nke ndị ọrụ ugbo na-ejikarị eme ihe. Ogologo 55 cm n'ogologo, ihe dị ka kilogram 1.8. Akuku ihe ubi na-achota n'ime iri asaa. Ogologo echekwara ma nwee ihe oriri.
Minowace. Oge etiti oge (60 ụbọchị) dịka daikon. Ọ na-eguzogide ọgwụ na ọrịa, nwere mgbatị ogologo 50 cm ma tụọ ruo 1.5 n'arọ. A na-echekwa ya n'ụzọ zuru ezu, na-enweghị isi ya.
Elephant Fang. Nke a dịgasị iche iche dị mma maka ebe ndịda. Ọdịdị nke etiti oge (ụbọchị 80), ogologo nke mkpụrụ ahụ hà 60 cm, ma ibu dị oke dị ka iche iche - naanị 0,5 n'arọ.
Na Ịntanetị, ị nwere ike ịchọta ụdị ndị ọzọ ị nwere ike ịchọta uru karịa, ma echefula na nsogbu ahụ bụkwa ịchọ mkpụrụ osisi na ụgwọ ha. Ya mere, anyị ewepụtalarị gị iche iche, nke ị nwere ike ịchọta osisi na-enweghị ihe isi ike na ego.
Ị ma?Daikon nwere ike imeju imeju na akụrụ, yana mgbakasị.
Anyị na-aga n'ihu na-atụle ya, karịsịa ya ọdịda na nlekọta kwesịrị ekwesị. Anyị na-aga na ngalaba nke anyị na-akọwa otú esi akụ daikon. Mgbe ịzụrụ mkpụrụ ahụ, ịkwesịrị ịkwadebe ala ma mee ka ihe ọkụkụ na-akpata ihe dị mma, nke ga-enyere aka inweta mkpụrụ anya a tụrụ anya ya.
Daikon kwesịrị kụrụ ma na mmalite oge opupu ihe ubi ma ọ bụ mbubreyo okpomọkụ. Ọ bụrụ na ị erute n'oge ọzọ, ihe ọkụkụ ga-ebido akụ (ọ bụrụ na nke ahụ emee, chefuo owuwe ihe ubi). Mgbe ị na-akụ okpomọkụ radish na mbara ala na mmiri, ị ga-ama na ọ bụrụ na ị na-ebi n'ebe ugwu nke 55 nnweta, mgbe ahụ mgbọrọgwụ ga-aga ozugbo. Mgbe a kụrụ, a ghaghị iburu n'uche na osisi anaghị anabata okpomọkụ dị n'okpuru +10, ya mere, a na-ahazi "oge opupu ihe ubi" maka ọnọdụ ihu igwe n'ezie. Ọ bụrụ na ọ na-eche na n'abalị ahụ, ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịda n'okpuru ihe achọrọ - mkpuchi ya na fim ma ọ bụ mkpuchi ọkụ ọzọ.
Ọ dị mkpa!Daikon chọrọ otutu ohere, ya mere egbula ya nso. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, jigide 30 cm.
Ịbanye na ngwụsị oge okpomọkụ ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ. N'okwu a, ọ bara uru karịa ịtụ ụjọ ịbanye n'ụgbọ ahụ, ọ bụghị ntu oyi.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọrụ kachasị mkpa maka gị, mgbe ị na-erute daikon, bụ igbochi ya ịbanye na akụ ahụ ma ọ bụ na-emeri.
O nwere ike ịbụ na ị hụworị na daikon dị gị mma, ugbu a, anyị ga-elebakwu anya n'ịgha mkpụrụ ya na nlekọta na-elekọta ihe ọkụkụ. Ọ bara uru ịmara na ọ na-eto nke ọma mgbe mkpo (ha na-ejupụta nitrogen), tomato, cucumbers na carrots.
Ọ dị mkpa! Ị pụghị akụ daikon mgbe kabeeji (ụdị ọ bụla).
Tupu ị kụọ n'ala, ọ dị gị mkpa igwu na ifatụ ala ala (mana ọ bụghị iji aka nri ọhụrụ). Ọ bụrụ na ala dị acidic - mee ka ha wayo. Ụfọdụ ndị ọrụ ugbo na-eji mgbapụta ahụ dịka ngwá ọrụ maka ịkụ ihe. Ha na-emepe oghere, nke jupụtara na chernozem ma ọ bụ ala ndị ọzọ na-eme nri. Nkwadebe nke ala a nwere ike nyochaa zuru ezu.
Anyị achọpụtaworị otú e si eto daikon n'ọhịa, ugbu a, ka anyị chigharịkwuo n'ilekọta osisi ahụ ma na-achịkwa ihe ọkụkụ ya.
Daikon anaghị achọ nlekọta pụrụ iche, ọ bụ iji igbo ohia na oge, mmiri ya ma kpuchie ya na ntu oyi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ dịghị ihe isi ike ọ bụla ị ga-ahapụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe "afụ ọkụ" na pests.
Akpụkpọ ụkwụ. Ogwu a nwere ike imebi ahihia akwukwo nri gi site n'ibibi akwukwo ya. Parasaiti ahụ na-edozi na radish na kabeeji. Ya mere, ọ bụrụ na e gburu kabeeji n'ubi gị, mgbe ahụ daikon ga-esote. Iji kpochapụ ahụhụ ahụ, ịkwesịrị ịkụ anụ ọhịa na ash ma ọ bụ ntụ ụtaba na-ejikọta na ash.
Kabeeji na-agba - ụdị nke ijiji ifuru, nke dakwasịrị n'elu mgbọrọgwụ cruciferous. Worms na-eri mgbọrọgwụ ma osisi ahụ kpochara. N'okwu a, ofufe ahụ dị ize ndụ na izu abụọ mbụ, ruo mgbe mgbọrọgwụ siri ike, ya mere ọ dị mkpa ka i jiri ọgwụ a mee ihe ngwa ngwa. Usoro nke mgba a gụnyere itinye lime na carbolineum ma ọ bụ ngwakọta nke wayo na ụtaba, nke a na-fesa n'elu ala gburugburu osisi ahụ.
Mgbe njedebe nke oge achọrọ maka ụdị ọ bụla dị iche iche, a ghaghị iwepụ daikon. A na-eme nke a nanị na ihu igwe akọrọ, na-adọpụpụta osisi ahụ n'elu (ma ọ bụrụ na daikon nọdụrụ ọdụ - jiri onks).
Ọ dị mkpa!Nkpọrọgwụ kụrụ, ọbụna obere mmebi, agaghị echekwara ruo ogologo oge. Ya mere, mgbe ị na-ewe ihe ubi, ọ dị gị mkpa iji nlezianya kewaa ala ma jiri nlezianya nyochaa "ahụ" nke osisi ahụ.
Ozugbo weputara mgbọrọgwụ maka ịgha mkpụrụ. Karịsịa, mmiri akuku daikons na-eji ya na bee petioles 10 cm ogologo.
Kwesịrị na-enweghị mmebi na igbe, a na-awụkwa oyi akwa ọ bụla na akpa ma ọ bụ ájá. Na nchekwa nchekwa ga-edebe na + 1- + 2 ogo. Ya mere, ihe akuku ahihia ga - abughi nke kachasi ogologo, n'enweghi ike na adighi uto.
Anyị gwara gị banyere Oriental Root akwukwo nri - Daikon. Ndi radish nke Japanese nwere ọtụtụ uru ọ bara ghara ịkụnye ya na nkata ha, karịsịa ebe ọ bụ na ị marala mgbe ị ga-akụ na ehicha daikon na otu esi esi edozi pests na akụ.
Potato "Openwork": nkọwa nke oge dị iche iche, àgwà, foto na ùgwù
Na-eme nri dị ụtọ na ezi salad sitere na tuna na kabeeji Chinese
Callistemon: nkọwa, atụmatụ nke nlekọta, ụdị
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Otu esi eto eto di elu, kuru ma lelee daikon